Galaxy A71 4G na-anata Android 11 na One UI 3.1 | Gam akporosis
Galaxy A71 4G na-anata Android 11 na One UI 3.1
Izu ole na ole gara aga, Galaxy A71 5G A na-emelite gam akporo 11 yana ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke njedebe, agbanyeghị, ụdị 4G ahapụla nko ahụ, ụdị nke amalitela imelite na Europe, ma ọbụghị ụdị nke 3.0 dịka nsụgharị 5G, mana na Otu UI 3.1.
Mmelite a na-esonyere patch nche maka ọnwa nke ọnwa Febụwarị na nọmba ngwa ngwa bụ A715FXXU3BUB5. Mmelite nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 GB, 2,7 GB kpọmkwem Ma ọ bụ nnukwu mmelite ebe ụdị a kụrụ ahịa na One UI 2.5, dịka ụdị 5G nke Galaxy A71.
Dị ka ụdị nke 3.0 nke ụdị nhazi nke Samsung, ụdị a gụnyere interface a gbanwere agbanwe, ebe ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-ahụ anya ka emezigharị iji nye ọdịdị nke oge a ma kwado ohere, mana idebe ihe kacha mkpa nke Otu UI.
Banyere ọrụ ọhụrụ nke sitere na mmelite a, anyị na-ahụ Dị Nso ọrụ (iji kesaa faịlụ na otu ma ọ bụ karịa ngwaọrụ n'otu oge), Samsung Free, ọrụ mgbata abụọ mgbe anyị na-ehi ụra.
Mba mbu ebe mmelite ohuru a di ugbua dị na Poland, n'ihi ya, ọ bụ ụbọchị nke ụbọchị, ọbụlagodi ọtụtụ awa, na ọ gbasaa ruo mba ndị ọzọ, ọ bụrụhaala na mwepụta a ejikọghị ya na ụdị nsogbu njedebe.
Mgbe mmelite ahụ dị, anyị ga-enweta ọkwa na njedebe nke ga-akpọ anyị ka anyị budata ma wụnye ya. Ọ bụrụ n'ịchọghị ichere ịnata ya, ịnwere ike ịnweta ntọala ntọala na ngalaba ahụ Mmelite ngwanrọ.
4dị 71G nke Galaxy AXNUMX gụnyere a Ihuenyo 6,7-inch na mkpebi FullHD +, tinyere 6 GB nke RAM, 128 GB nke nchekwa, igwefoto anọ n'azụ nwere isi 64 MP na n'ihu 32 MP.
El Galaxy A71 4G dị na Amazon maka ihe dị n'okpuru euro 300.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Galaxy A71 4G na-anata Android 11 na One UI 3.1
[VIDEO] Otu esi etinye Google Assistant na Windows, MacOS na Linux